Pakistaan oo qabatay nin faransiiska u dhashay oo u socday Alshabaab – SBC
Pakistaan oo qabatay nin faransiiska u dhashay oo u socday Alshabaab
Saraakiil ciidan oo ka tirsan Dowlada pakistaan ayaa sheegay in ay gacanta lagu dhigay nin Dhalashadiisu tahay Faransiis oo ku sii jeeday wadanka soomaaliya kaasi oo la sheegay inuu ka mid yahay urur weynaha Alqaacida.
Ninkan la qabtay oo lagu magacaabo Naamen Meziche waxaa uu ka mid yahay dad lala xiririnaayo inay wax ka ogaayeen weerarkii 9/11 ee lagu weeraray mareykanka waxaana xiiligan la qabanayay la sheegay inuu ku wajahnaa dalka soomaaliya
Sarkaal ka tirsan Dowlada pakistaan oo sheegay inuusan ogoleyn in magaciisa la xigto uu xaqiijin karo in ninkaasi gacanta lagu hayo isaga oo baaritaan lagu sameyn doono.
Ninkan Faransiiska ah ayaa ku biiraya tiro dad ah oo caalamka daafihiisa ka soo jeeda kuwaasi oo lala xiriirinayo Alqaacida, ninka haatan la hayo waxaa u qorsheyned baa la yiri inuu tago dalka Soomaaliya si uu uga barbar dagaalamo Xarakada alshabaab oo dagaal kula jirta DKMG iyo Ciidamada Amisom.
Dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in ninkasi uu ku wajahnaa wadamka Afqhanistaan si uu ugu biro dhaqdhaqaaqa Alqaacida ee Farsiininka ku leh wadankaasi.
Ma cada ilaa iyo iminka in ninkani uu Faransiiska ah uu doonayay inuu aado Soomaaliya iyi meel kale marka laga reebo wararka Kala duwan ee laga helayo saraakiisha warkan Bixisay.
Xaqu marka hore ciriiri buu galaa waana kacaa kufaa waa sune
war calaan yahaw al qaacidadu ma xaq bay ku taagn yihin duf ku baxe orod diinta baro
hadaa ma Amerika iyo reer galbeed miyaa xaq ku taagan.